पर्खाइको पीडा सहेर कहिलेसम्म बस्ने ? – दैलो न्युज । न्याय र समानताको संवाहक
पर्खाइको पीडा सहेर कहिलेसम्म बस्ने ?
भदौ १४, २०७५ ०३:२६ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, १३ भदौ : द्वन्द्वका कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले ढिलो गरी न्याय दिनाको कुनै अर्थ नहुने भन्दै बेपत्ता भएका आफ्ना आफन्तजनको अवस्था र स्थिति सार्वजानिक गर्न सरकारसित माग गर्नुभएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय बेपत्तासम्बन्धी दिवसका सम्झनामा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आइसिआरसी), नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र बेपत्ता परिवार समाजद्वारा संयुुक्तरुपमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँहरुले अहिलेसम्म आफ्ना माग सरकारले पूरा नगरेकामा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
आइसिआरसीका अनुसार नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा एक हजार ३३३ बेपत्ता भएका थिए । कार्यक्रममा गोरखा जिल्लाका विमला ढकालले प्रश्न गरिन्, “मेरो श्रीमान् बेपत्ता हुनुभएकोे लामो सयम बितिसक्यो अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन । पर्खाइको पीडा सहेर कहिलेसम्म बस्ने ?”
“ श्रीमानलाई कसले कहाँ बेपत्ता बनायो थाहा छैन । विसं २०७२ को भूकम्पले घर लडायो । न कमाउने मान्छे, न बस्ने घर । बाँच्ने कसरी बाँच्ने ? गहभरि आँसु पार्दै काभ्रेकी पूर्णमाया लामाले कार्यक्रममा सुनाइन् । नेपाल रेडक्रसका महामन्त्री देवरत्न धाख्वाले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारको पीडा कम गराउन सबै निकायले ध्यान पुरयाउनु पर्छ भन्नुभयो ।
रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिका नेपाल प्रमुख अन्द्रे पेकेले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीले छिट्टै निकास प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सो अवसरमा ‘प्रतीक्षारत आँखाहरु’ शीर्षकको नाटक मञ्चन तथा ‘नेपालमा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरु को अद्यावधिक सूची’ सार्वजानिक भएको थियो ।